FedEx Cup ကိုအမှတ် (သူတို့ PGA Tour အပေါ်အလုပ်ဘယ်လို)
FedEx Cup ပြိုင်ပွဲအတွက် PGA Tour အပေါ်စီးရီးထား
အဆိုပါ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်အခန်းဆက်မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် PGA Tour 2007 ခုနှစ်ရာသီနှင့်အတူစတင်။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် seasonlong အချက်များကို ယခုနှစ်သင်တန်းကျော်စုပေါင်းအချက်များ golfers ရသော Chase ။ အဆိုပါ FedEx Cup ကို PLAYOFF သို့ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲစီးရီးအချိန်ဇယားကိုကြိုတင်ရဲ့အဆုံးမှာထိပ် Point-getters နှင့်တစ်ဦးကြီးများငွေသားပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေဆုကြေးငွေဆုအနိုင်ရ။ 2013 ခုနှစ်ရာသီနှင့်အတူစတင်, အ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်စာရင်းကိုလည်း PGA Tour အစားထိုး ပိုက်ဆံစာရင်း နောက်တစ်နှစ်ဘို့မိမိတို့အပြည့်အဝကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုစောင့်ရှောက်သောဂေါက်သီးအဆုံးအဖြတ်သည်။
FedEx Cup ကိုအခြေခံ:
ယင်းအပေါ် FedEx Cup ပြိုင်ပွဲ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ PGA Tour တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
တစ်ခုချင်းစီကိုတပတ်ဂေါက်သီး PGA Tour ဖြစ်ရပ်များမှာသူတို့ရဲ့ finish ကိုများအတွက်အချက်များဝင်ငွေ; သူတို့အမှတ်အထိထည့်ပါ။
ယင်းမှပေါ်အချက်များစာရင်းအပြောင်းအရွေ့ပေါ်ရှိ "ပုံမှန်ရာသီ" ဟုထိပ်တန်း 125 ရဲ့အဆုံးမှာ "PLAYOFF ။ "
အဆိုပါ PLAYOFF ထဲမှာအထှတျအထိလေးပြိုင်ပွဲတစ်စီးရီးများမှာ Tour Championship ပြိုင်ပွဲ ဟာ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်ချန်ပီယံတစ်ဦး $ 35 သန်းဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်ကနေသရဖူဆောင်းနှင့် $ 10 သန်းချီးမြှင့်သောအပြီး။
သတိပြုပါရန်အခြားအရေးကြီးသောအရာတို့ကိုအမှတ်တန်ဖိုး PLAYOFF ဖြစ်ရပ်များအတွက် quintupled ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကိုလည်းမတိုင်မီခရီးစဉ်ချန်ပီယံရှစ်မှ reset နေကြသည်။
အဆိုပါ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲစီးရီး၏ "ပုံမှန်ရာသီ" ဟုရန် PGA Tour အချိန်ဇယားကိုအပတ် 1 မှကြက် Wyndham ချန်ပီယံရှစ် သြဂုတ်လလယ်ပိုင်း၌တည်၏။ အဓိက - အဆိုပါမာစတာ , အမေရိကန်ကိုဖွင့် , ဗြိတိန်ပွင့်လင်း ခြင်း, PGA Championship - ထိုကြောင့်, ပုံမှန်ရာသီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဂေါက်သီးရိုက်ချန်ပီယံ အပတ် 1 နှင့် Wyndham အကြားပေါ်ပေါက်သောဖြစ်ရပ်များ။
ဤ "ပုံမှန်ရာသီ" ပြိုင်ပွဲတစ်ဦးချင်းစီဂေါက်သီးလောကအတွက်အရာအချက်များအစုတခုပမာဏ, ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါ FedEx Cup ကိုပုံမှန်ရာသီ၏နိဂုံးမှာအလုံအလောက်အချက်များနှင့်အတူသူတို့အားဂေါက်သီးဟာ PLAYOFF သို့တိုး။
ဒါ့အပြင်အဆိုပါ PLAYOFF အတွက်ရရှိနိုင်ပါအချက်တန်ဖိုးများ quintuple ပုံမှန်ရာသီပြိုင်ပွဲအတွက်ရရှိနိုင်သူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
(X ကိုအရပျ၌ပြီးသွားပုံမှန်ရာသီအတွက် 300 မှတ်ရကျိုးနပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ, က PLAYOFF အတွက် 1500 အချက်များရရှိမည်) ။ စီးရီး-အဆုံးသတ် Tour Championship ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီက, ထိုအချက်များကိုတစ်ချိန်ပုံသေနည်းကိုသုံးပြီး reset နေကြသည်; ယင်းသို့အဆိုပါခရီးစဉ်ချန်ပီယံရှစ်ဖို့ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲစီးရီးချန်ပီယံအနိုင်ရမှာရိုက်ချက်ကသူကိုလူတိုင်းကိုပေးတော်မူ၏။
FedEx Cup ကို PLAYOFF:
အဆိုပါ FedEx Cup ကိုပုံမှန်ရာသီ၏နိဂုံးသည် PLAYOFF သို့အချက်များကိုစာရင်းကြိုတင်ပေါ်တွင်ထိပ်တန်း 125 ဂေါက်သီး, အလှည့်လည်ချန်ပီယံရှစ်အတွက်အထှတျအထိလေးပြိုင်ပွဲတစ်စီးရီးမှာ။ သာပေါင်း 30 ဂေါက်သီးနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်မှအပေါ်ကိုရွှေ့သည်အထိ PLAYOFF တစ်ခုချင်းစီရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, လယ်ကွင်း, ဖြတ်နေကြသည်။
အဆိုပါလေး PLAYOFF ပြိုင်ပွဲနေသောခေါင်းစဉ်:
မြောက်ပိုင်းတိုင်း Trust မှ (လယ်ပြင်၌ 125 ဂေါက်သီး)
Deutsche Bank တို့ချန်ပီယံရှစ် (လယ်ပြင်၌ရှိသောရေ 100 ဂေါက်သီး)
BMW ကားချန်ပီယံရှစ် (လယ်ပြင်၌ 70 ဂေါက်သီး)
tour ချန်ပီယံရှစ် (လယ်ပြင်၌အသက် 30 ဂေါက်သီး)
အဆိုပါ PLAYOFF ၏လယ်ပြင်တွင်အဆိုပါဖြတ်တောက်မှုတစ်ဦးချင်းစီအပတ်က FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်စာရင်းတွင်အဆင့်ကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဥပမာ, Deutsche ဘဏ်ချန်ပီယံရှစ်ရန်အချက်များစာရင်းကြိုတင်အပေါ် PLAYOFF အပတ် 1, သာထိပ်တန်း 100 အောက်ပါ။
အဆိုပါခရီးစဉ်ချန်ပီယံရှစ်တွင်အောက်ပါအချက်များစာရင်းပေါ်ကနေအဆိုပါဂေါက်သီးဟာ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံသရဖူရရှိသည်။
အဆိုပါ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံအနိုင်ရဂေါက်သီးနေသောခေါင်းစဉ်:
2017 - ကို Justin သောမတ်စ်
2015 - ဂျော်ဒန် Spieth
2011 - ဘီလ် Haas
2010 - ဂျင်မ် Furyk
2009 - က Tiger Woods
2008 - ဗီဂျေး Singh က
2007 ခုနှစ် - က Tiger Woods
FedEx Cup ကိုအမှတ်နှင့် PGA Tour အရည်အချင်းများ:
အဆိုပါ PLAYOFF သို့ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်စာရင်းကြိုတင်အပေါ် Nos ။ 1-125 ပြီးဂေါက်သီး။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ထိပ်တန်း 125 အပြင်ဘက်ရှိသူများ PGA Tour အဖွဲ့ဝင်များကကော? အဆိုပါများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်လာအချက်များစာရင်းတွင် Nos ။ 126-200 ပြီးဂေါက်သီး Web.com ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ၎င်းအနေဖြင့်ထိပ်တန်း 75 ပေါင်းစပ်သော Web.com Tour သူတို့နှင့်အတူပိုက်ဆံစာရင်းကို PGA Tour အတွက် FedEx Cup ကို PLAYOFF များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ပျက်ကွက်သူကိုဂေါက်သီး။
သူများသည် 150 ဂေါက်သီးထိပ်ပိုက်ဆံငွေရရှိသူတွေကအောက်ပါရာသီအတွက် PGA Tour ကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုခံယူသော၏အဆုံးမှာလေးပြိုင်ပွဲကိုကျော်ယှဉ်ပြိုင်။
အဆိုပါ Web.com ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်ထိပ်တန်း 25 သို့သော်ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်သို့သွား PGA Tour ကတ်များကိုအာမခံနေကြသည်, သာ အခြား 25 ဂေါက်သီး PGA Tour အဆင့်အတန်းနှင့်အတူ Web.com ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုအထဲကပေါ်လာပြီ။
ကြောင်းပုံပြင်၏ကိုယ်ကျင့်တရား: အ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်စာရင်းတွင်ထိပ်တန်း 125 အပြင်ဘက်ပြီးအောင်မထားပါနဲ့။
ပွိုင့်ရပ်တည်မှုအပါအဝင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည် PGATour.com အပေါ် FedEx Cup ကိုအညွှန်းကိန်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။
1984 မာစတာပြိုင်ပွဲ: တစ် '' ဝိညာဉ် '' ဖြင့်အတုယူတစ်ဦးကအောင်ပွဲခံ
1950 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Hogan ရဲ့အောင်ပွဲရသို့ပြန်သွားသည်
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ် RSM Classic ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
ဗြိတိန် Ladies အပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ်
1928 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Diegel ကလဲ့စားနှင့်ဒိုင်းဆုလာ
Owen Corning &0င်-ငါအားဖြင့်တင်ပြမာရသွန် Classic
PGA Tour နှစ်အလိုက်ပိုက်ဆံခေါင်းဆောင်များ
PGA Tour Wyndham ချန်ပီယံရှစ်
Spieth ဒါဟာရှုံးပြီးနောက် Willett ဟာ 2016 မာစတာပြိုင်ပွဲဆွတ်ခူး
1961 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား: Format ကိုမှအပြောင်းအလဲများ, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အမေရိကန်နိုင်ငံဝင်း
အခုလည်း Creating နှင့်အသုံးပြုခြင်း
25 အကြိုက်ဆုံးမိသားစုသမိုင်း Quotes
က Short 25-30 မိနစ်ကာယဗလလေ့ကျင့်ယလေ့ကျင့်ခန်းအနေဖြင့်ဂရိတ်ကာယဗလလေ့ကျင့်ရလဒ်များ Get
10 ဂရိတ်အဆင့်မြင့် Beginner မော်တော်ဆိုင်ကယ်
မျိုးရိုးဗီဇအတွက် Dihybrid Cross ဘို့ဖြစ်နိုင်
Poly ဘောလုံး: စားပွဲတင်တင်းနစ်ဘောလုံးပြောင်းခြင်းနေ
အီတလီအတွက်ကြိယာ Essere အကြောင်းလေ့လာပါ
ဟားဘတ်ဟူးဗားသည် Fast Facts
တစ်ကောလိပ်အခန်းဖော်သဘောတူညီချက် Set Up လုပ်နည်း
ကနေဒါရဲ့ပါလီမန်: Commons ၏အိမ်
ဘယ်လိုဆောင်းရာသီယာဉ်မောင်းများအတွက်သင့် Mustang ပြင်ဆင်ပါရန်
1950 မှသည် 1990 ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတစျဆငျ့ထိပ်တန်းတီထွင်မှု
Wakeboarding တစ် PWC ဝယ်ယူစဉ်းစားသင့်အဘယ်ကြောင့်5အကြောင်းရင်းများ
Scratch ကနေတစ်ခု Access ကို 2013 ခုနှစ်ဒေတာဘေ့စ Creating
Tonatiuh - အ Aztec နေ၏ဘုရားသခင်, မြေသြဇာနှင့်အနစ်နာခံ
5 အရာကောလိပ်မှပါမောက္ခသင့် Freshman နားလည်စေချင်
မီတာသို့မဟုတ် M က? အံခြင်းနှင့် Molality အကြားခြားနားချက်
ယင်းစာသင်ခန်းထဲမှာလူငယ်ကို Creative စာရေးဆရာ 24 ဂျာနယ် prompt